Ama-generator e-infographic aku-inthanethi, amathuluzi nezinkundla
The imboni ye-infographics iyaqhuma futhi manje sibona amathuluzi amasha okusiza. Njengamanje, ama-ejensi e-infographics akhokhisa phakathi kuka- $ 2k no- $ 5k ukucwaninga, ukuklama nokukhuthaza i-infographic emnandi.
Lawa mathuluzi azokwenza ukuthuthukiswa kwe-infographics yakho kubize kancane, kube lula ukuklama nokushicilela, futhi amanye afaka phakathi amamojula wokubika ukubona ukuthi ama-infographics akho asatshalaliswa futhi akhuthazwa kangakanani. Abanye babo basebancane ngakho-ke kungadingeka ubhekane nobunzima, kepha konke kuyahlaba umxhwele.
Ungahle uhlezi phezu kwenqwaba yezibalo ezikhange ngempela futhi ulingeke ukuba ushaye inqwaba yamashadi ku-infographic. Akusikho okwenzelwe i-infographic, yilokho okwenzelwe i-Excel. I-infographic kufanele ibe netimu emaphakathi nenhloso ethile kulokho ofuna ukukuhambisa noma ukukuchazela izithameli zakho. I-infographic ihamba nomsebenzisi ngendaba ukuze bakwazi ukugcina nokuqonda imininingwane kalula. I-infographic yakho kufanele iphele ngohlobo oluthile lokubizelwa esenzweni ukuyibopha ndawonye.
I-Easel.ly - dala futhi wabelane ngemibono ebonakalayo online
IBM Amaningi amaningi - Thola imininingwane kudatha yakho. Yabelana ngemininingwane yakho nanoma ubani omthandayo. Shintshanisa imibono nomphakathi wezinkulungwane. Ulethwe kuwe ngenye yezinkampani ezihlonishwa kakhulu emhlabeni. Futhi… kumahhala ayi-100%.
ithebula - Bona futhi wabelane ngedatha yakho ngemizuzu. Mahhala.
I-Infogram - Sisebenza nabaqambi abahle ukukulethela izinto ezihamba phambili nezindikimba ze-infographics yakho. Mane ukhethe noma yini oyithandayo ukwakha eyakho.
Cabanga Igrafu - Dala amaphosta abukekayo anomthelela, izindatshana nezethulo. Umtapo wabo wezincwadi uhlanganisa imifanekiso engaphezu kuka-3,000 XNUMX yesayensi kanye nezakhiwo ezilungiselelwe ukusebenza ze-infographic.
Piktochart - I-Piktochart iphakathi kwezinhlelo zokusebenza zokuqala zewebhu eziku-inthanethi ezizimele ngokwakhiwa kwe-infographics. Umbono wayo ukuvumela abangaqambi / abahleli bohlelo ukudala ama-infographics asebenzisanayo ukukhuthaza imbangela / uphawu lwabo futhi bafundise ngendlela ejabulisayo nebandakanyayo.
I-Venngage - I-Venngage ikusiza ukuthi udale futhi ushicilele i-infographics yangokwezifiso, uhlanganyele ababukeli bakho, futhi ulandele imiphumela yakho. I-Venngage yipulatifomu yokushicilela ye-infographics enamandla kunazo zonke ezake zabathengisi nabashicileli.
Vuka iyithuluzi lamahhala elisetshenziselwa ukudala izethulo ezibandakanyayo, ama-infographics, amabhanela wewebhu nemifanekiso emifushane. Abasebenzisi be-Visme bangaqala kusuka kusethiwe yamathempulethi ochwepheshe noma baqale ngendwangu engenalutho futhi bakhe okuqukethwe kwabo, okwenziwe ngezifiso ngokuphelele kuzidingo zabo.
Ungenza ngisho ne-infographics kusuka kudivayisi yakho ye-iOS manje nge Umenzi we-infographic.
Ukudalulwa: Singabanikazi bezinye zalezi zinhlelo futhi sisebenzisa izixhumanisi kuso sonke lesi sihloko.
Tags: yakhela i-infographiceasellyama-generatorulwaziinfogramumklami we-infographici-infographic generatorumenzi we-infographicipulatifomu ye-infographicizifanekiso ze-infographicumenzi we-ios infographicI-Marketing Infographicsama-generator onlinepiktochartAmathuluziubuthii-visme
Ubuchwepheshe Abubambeleli Phansi… i-Flop!
May 28, 2012 ku-12: 56 PM
Siyabonga ngohlu. Lokhu impela kuyasiza njengoba umhlaba wezokuxhumana ujika ngokubonakalayo kunombhalo.
May 28, 2012 ku-6: 55 PM
Vuma @valerie_keys: disqus! Futhi ukuqasha iqembu lokuklama elinekhono ku-infographics kungafinyeleleka kuzabelomali eziningi zokumaketha. Lezi izindlela ezinhle zokuzakhela ezakho KANYE nokugcina izindleko ziphansi!
May 28, 2012 ku-7: 34 PM
Ngifunde okuthile okuhle kakhulu lapha.
Impela kufanele ibhukhimakhi yokuphinda uyivakashele. Ngiyamangala ukuthi uzama kangakanani
put ukwenza lolu hlobo lwesiza esimangalisayo esifundisayo.
Sep 28, 2014 ngo-8: 53 PM
Kuhle ukubhala uDouglas futhi ngiyabonga ngokuphawula iVisme. Ukungeza nje, i-Visme idlulela ngale kwe-infographics; ikuvumela ukuthi udale
noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe okubukwayo kufaka phakathi ukugqwayiza nezethulo.